चर्चित गायिका प्रबिशा अधिकारी, यस्ता छन् रोचक जानकारी – Jagaran Nepal
चर्चित गायिका प्रबिशा अधिकारी, यस्ता छन् रोचक जानकारी
गायिका प्रविशा अधिकारीले नेपाली चलचित्रको पाश्र्व गायनमा यात्रा थालेको एक दशक भन्दा बढी भैसकेको छ । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा उनको स्वरमा समावेश थुप्रै गीतले दर्शक तथा श्रोताको माया पाएका छन् । तर, जती चर्चा उनको स्वरमा समावेश…
गायिका प्रविशा अधिकारीले नेपाली चलचित्रको पाश्र्व गायनमा यात्रा थालेको एक दशक भन्दा बढी भैसकेको छ । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा उनको स्वरमा समावेश थुप्रै गीतले दर्शक तथा श्रोताको माया पाएका छन् । तर, जती चर्चा उनको स्वरमा समावेश गीतको भयो, सो अनुसारको चर्चा प्रविशाको भने भएन । तर, विगत एक सातादेखि उनको चर्चा फेरि चुलिएको छ ।
जन्म – सन् १९८९ फेब्रुअरी १० मा झापामा जन्मिएकी थिइन् । झापामा एस.एल.सि सम्मको अध्ययन गरेकी प्रबिशाले डिग्री सम्मको अध्ययन गरेकी छिन् । उनले बि.स. २०६१/६२ मा एस.एल.सि. पास गरेकि थिईन ।
संगीत यात्रा – उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि झापादेखी काठमाडौं आएकी प्रबिशा यसरी गायिका बन्छु भन्ने सोचेकि पनि थिईनन । उनले पहिलोपटक २०६४ सालमा बिदाई गीत गाएकी थिईन । उनले धेरै चर्चित गीतहरु गायकी छिन् तर उनले गीत जति चर्चा कमाउन सकिनन ।
अहिले सम्मका गीतहरु – ए मेरो हजुर ३ को जिन्दगी नै भन्दिन, चिट डे, तिमी बाहेक, माया, चलचित्र निगरानीको तिम्रै निगरानी, बाटो छेकी अङालो भरी, १६ बर्षे उमेरमा, नौलो नौलो, मायालुको गाउमा, काफल पाक्यो भन्छ लगायत दर्जनौ गीतहरु गायकी छिन् ।
भ्वाईसको प्रस्तुति पछि चर्चा –
‘भ्वाइस अफ नेपाल ३’ फाइनलमा उनले गाएको गीत र उनको स्वरको चर्चा सामाजिक संजालमा खुबै छ । प्रविशाले सर्वत्र प्रशंसा पनि बटुलेकी छिन् । भ्वाइसको स्टेजमा उनले आफ्नो स्वर रहेको चलचित्र ‘रोज’को ‘फूल हैन’ र ‘ए मेरो हजुर ३’को ‘जिन्दगी नै भन्दिनँ’ बोलको गीत गाएकी थिइन् ।
‘भ्वाइस अफ नेपाल’को स्टेजमा गीत गाएपछि धेरैले फोन गरेर बधाई दिए । धेरैले म्यासेज गरेर उनको स्वरको तारिफ गरे । अधिकांशले भने–‘प्रविशाजी तपाई त भाइरल हुनुभएछ ।’ सबैबाट तारिफ पाउँदा प्रविशा खुशी छिन् । यद्यपी, आफू भाइरल भए भनेर फुर्किने पक्षमा भने उनी छैनन् ।
उनले भनिन्–‘सबैको तारिफ पाउँदा निकै खुसी छु । यद्यपी संगीतमा लामो बाटो जानु छ । त्यसैले फुर्किने भन्दा पनि सम्हाल्दै अगाडि बढ्ने कुरामा ध्यान दिएकी छु ।’ सांगीतिक क्षेत्रमा लामो समय बिताएकी प्रविशाको धेरै गीतहरु रुचाईएका छन् । सो अनुसार उनको चर्चा भएको थिएन । त्यसमा प्रविशा स्वयंम आफ्नै कारण रहेको बताउँछिन् ।
‘हरेक कुराहरुलाई मैले झेल्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास ममा थिएनँ । मिडियासँग कुराकानीका लागि डराउने, विवादमा पर्छु कि भनेर डराउने गर्थेँ, प्रविशाले भनिन्, ‘मेरो कारणले नै पछाडि बसेकी हुँ । यद्यपी अहिले त्यो कुराले कुनै पछुतो भने लागेको छैन ।’
विगतलाई फर्किएर हेर्दा अहिले आफूमा हरेक कुरामा आत्मविश्वास धेरै बढेको प्रविशा बताउँछिन् । उनी लामो समयसम्म सांगीतिक क्षेत्रमा टिकिरहनु र अहिले आएर यसरी चर्चा हुनु आफ्नो लागि अझ ठूलो कुरा भएको बताउँछिन् ।
भ्वाईस अफ किड्सको जज –
प्रविशा ‘भ्वाइस अफ नेपाल किड्स’को निर्णायकका रुपमा समेत आबद्ध भएकी छिन् । ‘यसो सोच्दा मैले डिजर्भ गरिहाल्ने कुर्ची होइन कि भन्ने पनि लाग्छ । फेरि, प्रोफाइल अलिकति बनाएरै जानुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो’ ‘भ्वाइस अफ नेपाल किड्स’को निर्णायकका रुपमा आबद्ध हुनुको कारणबारे उनी भन्छिन्–‘त्यो आफैमा एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो । त्यहाँ जाने रहर जो कोहीलाई हुन्छ ।
सांगीतिक क्षेत्रको अनुभवका हिसाबले सक्छु कि भन्ने हिम्मत र बच्चाहरु एकदमै मनपर्ने भएका कारण जोडिएकी हुँ ।’ अहिले प्रविशा नयाँ गीतको तयारीमा छिन् । आफ्ना विगतका गीतहरु भन्दा फरक स्वादमा ‘शब्द’बोलको गीत ल्याउने तयारी गरेको प्रविशाले बताईन् । गीतमा उनकै शब्द, संगीत, स्वरसँगै अभिनय रहनेछ ।